Ukudibana kweMibuzo! · Oyoun | Inkcubeko yokucinga kwakhona
Wamkelekile kubudlelwane bemibuzo- iprojekthi edibeneyo yimibutho emihlanu eyahlukeneyo eyaqalwa ngexesha lobhubhane. Simema abantu ukuba babuze imibuzo ebaxhalabisayo, ngokweemeko zabo zengingqi. Ayisiyo yonke imibuzo ekufuneka iphendulwe ngokuyimfuneko, kodwa umbono kukuvula iingxoxo kunye neengxoxo.
Okwangoku, siphakathi ekuphuhliseni iwebhusayithi eya kuthi isebenze njengelizwe elibonakalayo apho nabani na anokuphonononga kwimilambo yemibuzo (kwaye akukho mpendulo).
Fikelela kuthi, ukuba unomdla wokuthatha inxaxheba kule projekthi nangayiphi na indlela! > hallo@oyoun.de
Ngokudibana kwemibuzo sifuna ukudibanisa abantu, samkele iimeko ezintsha kwaye sikhuthaze abantu ukuba bacamngce ngazo, bavakalise iinkxalabo zabo, iingxaki, uloyiko, imibuzo kunye nokwabelana nabanye, kuba sonke sinazo. Ukudibana kweMibuzo kufuna ukwakha iibhlorho ngokusebenzisa iindlela zokubuza, ngelixa usebenza kunye namaqela endawo, ngokwenza indawo ekwabelwana ngayo kwi-Intanethi ebhiyozela amandla nenkululeko yokubuza imibuzo njengempendulo, imibuzo efuna nzulu nangaphaya kwemida esele ikhona. , endaweni yesakhelo sokuphendula kuyo yonke imibuzo ngempendulo, ngombono omnyama nomhlophe. Ukudibana kweMibuzo yindawo apho ukuntsokotha kuxabiseka khona kunokoyikwa. Ngeli xesha lokungaqiniseki sifuna ukubonisa abantu ukuba abodwa kwaye singakwazi ukuncedana ngaphandle kokunika iimpendulo kwangoko kodwa ngokwenza imibuzo yethu nzulu kunxibelelwano olutsha.
Ukusebenza kunye kwinqanaba le-pan-Yurophu kunye nabathathi-nxaxheba abahlukeneyo, abavela kumazwe ahlukeneyo kunye nemvelaphi, sifuna ukukhuthaza abantu ukuba bazi ngakumbi kwaye babe novakalelo ngemicimbi yasekhaya neyelizwe jikelele, yeengxaki esabelana ngazo endaweni yomahluko owenziweyo osusahlula .
Sivulekile ukuba nenxaxheba. Ukuba unayo nayiphi na imbono ongathanda ukuyibona ngokudibana kweMibuzo, nceda ufikelele kuthi. I-Oyoun yindawo yokunxibelelana nabantu abakhe eJamani.
Le projekthi ixhaswa ngemali yiEuropean Cultural Foundation kunye neAllianz Foundation.
IG - Umbutho othatha inxaxheba:
Ixhaswe ngemali ngu @europeanculturalfoundation kunye @allianz